KERE ANY ATSIMO: Nanolotra 3 tapitrisa dolara ny Governemanta japoney – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:29
Miara-miasa amin'ny sehatra maro i Madagasikara sy Japon.
Accueil/Samihafa/KERE ANY ATSIMO: Nanolotra 3 tapitrisa dolara ny Governemanta japoney
KERE ANY ATSIMO: Nanolotra 3 tapitrisa dolara ny Governemanta japoney
Taorian’ny fitsidihana nataon’ny Ambasadaoron’i Japon ny CCO Kere sy ny vahoaka tany Atsimo, nanolotra fanampiana maika mitentina 3 tapitrisa dolara ny Fanjakana malagasy ry zareo Japoney.
Lucien R. 17 février 2021
Tsy niandry ela fa taorian’ny fitsidihana nataon’ny Ambasadaoron’i Japon tany Atsimo, herinandro lasa izay, nanolotra fanampiana maika mitentina 3 tapitrisa dolara ny Fanjakana malagasy ry zareo japoney. Nandritra ny fandraisan’ny Praiminisitra Ntsay Christian ny Ambasadaoron’i Japon, miasa sy monina eto Madagasikara, Andriamatoa Higuchi Yoshihiro tao amin’ny Lapan’i Mahazoarivo omaly maraina, no nitondran’ity farany fanamarihana mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny Kere mianjady any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy. Araka ny fanazavana nentin’ny Ambasadaoro hatrany dia nidina nijery ifotony ny zava-misy marina tany atsimo ny tenany taorian’ny antso nataon’ny Fanjakana malagasy. Nihaona mivantana tamin’ireo vahoaka marobe ianjadian’ity haitany sy tsy fanjarian-tsakafo ity ny tenany. Teo ihany koa ny fitsidihany ny CCO Kere izay rafitra mandray an-tanana sy mandrindra ny paikady any an-toerana, eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Ary nohamafisin’ny Ambasadaoro fa ny fahitan’ny masony ny toe-java-misy marina tany an-toerana no nahafahany nanao tatitra tany amin’ny foiben’ny Governemanta Japoney, any Tokyo.
Nanapa-kevitra avy hatrany ny Governemanta Japoney raha vao nandre ny tatitra, ary nanolotra fanampiana maika mitentina 3 tapitrisa dolara, manodidina eo amin’ny 11.4 miliara ariary, ho an’i Governemanta malagasy. Fanampiana ara-tsakafo ho an’olona manodidina ny 73.000, famenon-tsakafo ho an’ny vehivavy bevohoka 3.600 eo ho eo, sy ankizy 11.000, fanomezana fitaovana ara-pahadiovana sy ara-pahasalamana samihafa ho ana tokantrano maherin’ny 290 ary fiantohana fahazoana misotro rano fisotro madio ho an’olona hatramin’ny 10.000. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia ny Rafitry ny Firenena Mikambana sampana mpikarakara ny ankizy UNICEF “United Nations Children’s Fund” sy ny WFP “World Food Program” misahana ny sehatra ara-tsakafo no miara-misalaha amin’ny Fitondram-panjakana amin’ny fitantanana ity fanampiana ity.
Notsipihin’ny Ambasadaoro fa vonona ny hanohy hatrany ny fanohanany ny Governemanta malagasy amin’ny fiatrehany ny fanamby atao any Atsimo i Japon, ka miezaka ho eo anilan’ny mponina ianjadian’ny tsy fahampian-tsakafo (kere) sy ny tsy fahampian-drano, ary misokatra hatrany amin’ny fiaraha-miasa lavitra ezaka, toy ny tetikasa famatsian-drano. Hita sy tsapa, araka izany, fa mbola mipetraka hatrany ny fitokisan’ireo firenena vahiny sy mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena amin’ny Fitondram-panjakana malagasy.
FANAMPIANA NY ANY ATSIMO: Nanolotra 100 tapitrisa dolara ny Banky Iraisampirenena
TETIKASA « AVOTSE » ANY ATSIMO: Tafajoro ny EPP ao Behodatse sy Ankazombalala
FIFOHANA SIGARA SY FIHINANANA PARAKY : Malagasy miisa 8 300 isa-taona no maty
Nandamoka ny hetsiky ny mpanohitra : Tsy nipoitra ny mpitarika, miandrandra fitoniana ny vahoaka
FANANGANANA CSB, EPP, LALANA,…: Tsy ho adino amin’ny fampandrosoana intsony i Atsimo Atsinanana